Golaha wakiillada Puntland oo maaliyadda su’aalo dheeraad ah ka weydiinaya arrimaha miisaaniyadda – Kalfadhi
Golaha wakiillada Puntland ayaa maanta dood kulul ka yeeshay miisaaniyadda saggaalka bilood ee soo socda, taas oo wasaaradda maaliyadu ay baarlamanka horgaysay horraantii toddobaadka.
Guddiga dhaqaalaha iyo xisaabaadka ee baarlamanka ayaa goluhu warbixinta lafa-gurka miisaaniyadda ka dhegaystay, waxayna ugu dambayn ku baaqeen in sabtida loo yeero wasaaradda maaliyadda si ay uga jawaabto su’aalo dheeraad ah oo goluhu qabo.
Miisaaniyad saggaal bilood ah oo dhan $54 milyan ayaa xukuumadu soo gudbisay sabtidii. Waxay ahayd miisaaniyad gebi ahaanteed laga soo min-guuriyay tii hore 2018. Wasiirka maaliyadda Xasan Shire Cabdi wuxuu baarlamanka u sheegay duruufo badan oo ku xeeran in abuuraan miisaaniyad cusub.
Bishan Maarso ayay ku egtahay miisaaniyad saddex bilood ahayd oo xukuumadda loo ansixiyay bishii janaayo, si hawlaha dowladdu u sii socdaan. Goluhu muddo lix cisho ayuu la maqnaa miisaaniyadda.
Fadhiga ayaa kulanka 22aad kalfdhiga 43aad ee golaha wakiillada Puntland. Golaha ayaa kulanka xiga isugu imanaya Sabtida markaas oo la filayo in ay kulanka ka soo qaybgasho wasaaradda maaliyaddu.